शिक्षकको अपहरणपछि घाँटी रेटेर हत्या : प्रहरीको आशंका विप्लव समूहतिर! | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home समाचार राष्ट्रिय समाचार शिक्षकको अपहरणपछि घाँटी रेटेर हत्या : प्रहरीको आशंका विप्लव समूहतिर!
शिक्षकको अपहरणपछि घाँटी रेटेर हत्या : प्रहरीको आशंका विप्लव समूहतिर!
२०७७, २३ मंसिर मंगलवार १६:१८
त्यसैका आधारमा गोली हानी हत्या गरेको खबर सार्वजनिक भएको थियो । प्रहरी टोली घटनास्थल पुगेपछि घाँटी रेटेर मारेको पाइएको प्रदेश नम्बर १ का प्रहरी प्रमुख डीआईजी ईश्वरबाबु कार्कीले जानकारी दिए । उनले भने, “हात बाँधेर घाँटी रेटेको पाइएको छ । गोली हानेर होइन रेटेरै हत्या गरेको देखिएको छ । अनुसन्धान जारी छ । घटनामा संलग्नको खोजीमा जुटेका छौं ।”
प्रहरी र आफन्तले हत्यामा प्रतिबन्धित विप्लव समूहको संलग्नताको आशंका गरेका छन् । श्रेष्ठ स्थानीय सरस्वती आधारभूत स्कुलका प्रधानाध्यापक थिए । आज बिहानै चार–पाँच जनाको संख्यामा आएको समूहले श्रेष्ठलाई घरबाटै अपहरण गरेर लगेको थियो ।
उच्च प्रहरी अधिकारीका अनुसार विप्लव समूहविरुद्ध सुरक्षाकर्मीलाई सूचना दिएको भन्दै श्रेष्ठको अपहरणपछि हत्या भएको पारिवारिक स्रोतको भनाइ छ । baarakhari.com
Previous articleसगरमाथाको नयाँ उचाइ ८८४८.८६ मिटर
Next articleसगरमाथाको नयाँ उचाइ नाप्ने टोलीमा थिए बागलुङका रबिन कार्की